137 dalxiisayaal Ruush ah ayaa la karantiilay Cuba ka dib markii laga helay COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kuba Cuba » 137 dalxiisayaal Ruush ah ayaa la karantiilay Cuba ka dib markii laga helay COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Kuba Cuba • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Inta badan dalxiisayaasha Ruushka ee lagu go'doomiyay cudurka looga shakisan yahay COVID-19 ma muujiyaan wax calaamado ah, waxaana la sheegay in lagu tallaalay Ruushka safarkooda ka hor.
Qiyaastii 130 booqdayaal Ruush ah ayaa tijaabiyay COVID-19 kadib markay yimaadeen Varadero, Cuba Juun 30.
Axadii, waxaa jiray warbixino sheegaya in ka badan 150 dalxiisyaal go'doon ah.
Dhowr xubnood oo ka tirsan shaqaalaha diyaaradda ayaa sidoo kale laga helay COVID-19.
Sida laga soo xigtay Qunsulka Guud ee Ruushka ee Havana, Cuba, in ka badan 130 dalxiisayaal Ruush ah ayaa lagu karantiilay qolalka hudheelladooda sababo la xiriira infekshinka COVID-19.
“Markay tahay 4-ta Luuliyo, 127 qof oo ka yimid duulimaadyo ayaa yimid Juun 30 iyo 1-da Luuliyo oo weli [ku go'doonsan] baaritaanno wanaagsan oo COVID-19 ah. Waxaan rajeyneynaa natiijooyinka baaritaanada ku celiska ah ee 80 qof oo yimid July 1. Marka la eego dadka yimid July 3, waxaa jira toban qof oo tijaabooyin wanaagsan laga helay, [we] waxaan rajeyneynaa natiijooyin dheeri ah maanta, ”ayuu yiri Qunsulku.
Goor sii horeysay, Qunsuliyada guud ayaa soo warisay in qiyaastii 130 qof laga helay tijaabo caafimaad kadib markay yimaadeen Varadero Juun 30, oo ay ku jiraan dhowr shaqaale diyaarad ah. Tijaabaddii ku celiska ahayd waxay natiijo wanaagsan u soo celisay 33 qof. Waxaa jiray 80 tijaabooyin togan oo ka mid ah rakaabka diyaaradda xigta.
Sida muuqata, inta badan dalxiisayaasha lagu go'doomiyay tuhunka laga qabo infekshanka COVID-19 ma muujiyaan wax calaamado ah, waxaana la sheegay in lagu tallaalay Ruushka safarkooda ka hor. Waxay sidoo kale leeyihiin waraaqo ku saabsan imtixaannada PCR ee lagu qaaday Ruushka, oo waliba muujinaya natiijooyin xun.
Horaantii Juun, waxaa jiray ilaa 6,000 oo muwaadiniin Ruush ah meelaha dalxiiska Cuba. Marka loo eego qawaaniinta Cuba, dalxiisayaasha imanaya waa inay qaataan baaritaanka PCR ee cudurka COVID-19 gudaha 72 saacadood kahor safarkooda. Warqad cadeyneysa natiijada baaritaanka xun waa in la soo bandhigaa markii diyaaradda la raacayo.